सुनको मूल्य ७ हजार ३ सय रुपैयाँले घट्यो , प्रतितोला कतिमा झर्यो त ? हेर्नुहोसा – Kavrepati
Home / आर्थिक / सुनको मूल्य ७ हजार ३ सय रुपैयाँले घट्यो , प्रतितोला कतिमा झर्यो त ? हेर्नुहोसा
सुनको मूल्य ७ हजार ३ सय रुपैयाँले घट्यो , प्रतितोला कतिमा झर्यो त ? हेर्नुहोसा
admin August 25, 2021	आर्थिक Leaveacomment 243 Views
यो पनि….आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार, मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर …… नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
Previous नेपालमा बस्दा सर, नार्थी भन्थे अमेरिका बस्दा ड, लरे भन्न थाले, किरण गजमेरको सबैलाई रू’ हाउने कहाँनी (भि। डियो सहित हेर्नुस)
Next इन्डियन आइडल १२ को विजेता पवन दीप लाई अरुणिताले दिइन ७० लाखको गाडी उपहार